Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်သူနှင့် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း၊ ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
NEW WEI-LIN ENTERPRISE CO., LTD. ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း၊ in Taiwan။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့က process လုပ်ကြိုတင်မဲနည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် Optimum စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏ clients များအာမခံ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနအဖွဲ့, ဆန်းသစ်သောစိတ်ကူးများအဘို့အကြည့်ထုတ်ကုန်-လိုအပ်ကြောင်းကိုအခြေခံဖြေရှင်းချက်ပြောင်းလဲအပေါ်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အကျင့်ကိုကျင့်လက်ခံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ clients များတို့တွင်အလွန်အမင်းလူကြိုက်များအောင်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဈေးနှုန်းများမှာထိုထုတ်ကုန်ပူဇော်ရမည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း၊ ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း၊ ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan
VSK တဆေး Hydrating Cream အလင်းနှင့်လန်းဆန်းစေသောပုံဆောင်ခဲဓါတ်ကိုပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်မုန့်,တစ်ချက်ချင်းပွတ်တိုက်”စုပ်ယူ,ပြန်ဖြည့်သည်,နှင့်ရေထဲမှာသော့ခတ်” ,ခြောက်သွေ့ပြီးကြမ်းတမ်းသောအသားအရေများကိုစိုစွတ်နေစဉ်အဆီပြန်ခြင်း၊,အသားအရေသုညငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုအောင်Maintenance အာရုံစူးစိုက်အစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်းနှင့်ဆီပြန်ဖြည့်ခြင်းတို့သည်လှပသောအသားအရေရှိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်;အရေပြား elasticity ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအိပ်မက်မဟုတ်ပါဘူး. Maintenance ရည်ရွယ်ချက်အစိုဓာတ်,ချောမွေ့နှင့်အစိုဓာတ်,ပုလင်းတစ်လုံးသည်အရေပြားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်တင်းပေးသည်,နှင့်အလွယ်တကူတောက်ပချောမွေ့အသားအရေရှိပါတယ်.ကို Maintenance အကြံပေးချက်များ မြေပဲ ၂-၃ မှ ၃ ခုကိုယူပြီးမျက်နှာနှင့်လည်ပင်းကိုနှိပ်ပြီးစုပ်ယူရန်လက်ချောင်းများဖြင့်မျက်နှာနှင့်လည်ပင်းကိုအညီအမျှပြုလုပ်ပါ။. အမျိုးအစားအားဖြည့်:အရေပြားအလွန်ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ရေငတ်သောအခါ,လျှောက်လွှာစုပ်ယူပြီးနောက်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့,သင်သည်လျှောက်လွှာကိုဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်နိုင်သည်. စွမ်းရည်:60ml/ပုလင်းမူလ:ထိုင်ဝမ်
အချိန်မတိုင်မီအရေပြားအိုမင်းခြင်းကိုလျှော့ချနည်း အသက်သည်အမျိုးသမီးများ၏လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး သည်မိမိတို့၏အသက်အရွယ်နှင့်မတူဘဲအခြားသူများကချီးမွမ်းခြင်းခံရသောအခါသူတို့သည်ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်အမျိုးသမီးငယ်တစ် ဦး ကိုအဒေါ်ဟုခေါ်လျှင်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်နုပျိုသောအဆင်းကိုကြည့်လိုလျှင်အရေပြားစောင့်ရှောက်မှုနှင့်စတင်ရမည်။
သင်ငယ်ရွယ်စဉ်ကအိုမင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်ခြင်းသည်ပြproblemနာမဟုတ်သော်လည်းအသက်အရွယ်အမျိုးမျိုး၌အရေပြားအိုမင်းမှုသည်ကွဲပြားသောပြhaveနာများရှိနိုင်သည်။ လူငယ်အရေပြားသည်ကော်လာဂျင်၊ မင်းနောက်ကျရင်မင်းဝက်ခြံတွေပဲရလိမ့်မယ်။
အသက် ၂၅ နှစ်မှာအရေပြားဟာအသက်ကြီးလာတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှေးကွေးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအလုပ်နှင့်အနားယူအဖြစ်အချက်များအရေပြားယိုယွင်းစေနိုင်သည်။ သင်မကြာသေးမီကမှန်ထဲကိုကြည့်ပြီးသင်၏အသားအရေမှေးမှိန်လာပြီးသင်၏ချွေးပေါက်များကျယ်လာသည်ကိုတွေ့ရှိပါကသင်၏အရေပြားပြန်လည်ပြုပြင်မှုမြန်နှုန်းသည်ယခင်ကထက်နှေးကွေးသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်, ရွေးချယ်တဲ့အခါအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်များ, သင် anti- အိုမင်းပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူသွေးရည်ကြည်သို့မဟုတ် creams ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ယခုသင့်အသားအရေကိုအကောင်းဆုံးအနေအထားဖြင့်စောင့်ရှောက်ရန်စတင်ပါ။
လူအများစုကအရေပြားအိုမင်းခြင်းလက္ခဏာကိုမသိကြဘူး။ သင့်အသားအရေတွင်အောက်ပါအခြေအနေ (၇) ခုရှိပါကသင့်အသားအရေကိုဂရုစိုက်ပါ။
အရေပြားအိုမင်းခြင်း၏ပထမနိမိတ်လက္ခဏာ ၇ ချက်ကားအဘယ်နည်း။
4. Dusky အသားအရေ
အကောင်းဆုံး4အကြံပြုပါသည်အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်များ